Iinkcukacha-manani eziBumbeneyo zinokuKwenza ungalunganga | Martech Zone
Sele kuyiminyaka engama-20 okoko ndaqala kwishishini leendaba. Ndiyabulela ngamathuba andibeka phambili kubuchwephesha bokuthengisa database ngelo xesha. Ndiyabulela ukuba sikhawuleze safumana isiseko sedatha zemigodi. Uninzi lwezixhobo ngelo xesha zisinike iinkcukacha-manani ezihlanganisiweyo kwindawo yonke egciniweyo. Kodwa la manani ewonke anokukuqhubela ngokungalunganga.
Ngombono ohlanganisiweyo wabathengi bethu, siya kufumanisa ukuba iprofayili yabathengi bethu yayiyeyesini esithile, ubudala, umvuzo kunye nokuhlala kwindawo ethile. Ukuthengisa kwelo candelo, siza kubuza amakhaya kulawo athile. Umzekelo unokuba ngamadoda, aneminyaka engama-30 ukuya kwengama-50, enemali engenayo yasekhaya engaphezulu kwe- $ 50k. Sityhala umkhankaso kwabo baphulaphuli ngeposi ethe ngqo yindlu kunye nephephandaba ngengingqi kwaye siya kuqinisekisa ukuba siza kubetha wonke umntu kuloo mbuzo.
Njengoko izixhobo zokunika ingxelo kunye nokwahlulahlula kwakusomelela, sikwazile ukumba nzulu. Endaweni yokujonga lonke ugcino lwedatha, ngesiquphe sakwazi ukwahlula isiseko sedatha kwaye sachonga iipokotho zabantu ababenethemba elikhulu. Umzekelo, lo mzekelo ungasentla unokungahoyi oomama abangatshatanga abanengeniso engaphezulu kwe- $ 70k ebhalwe ngaphezulu njengomthengi onokubakho. Ngelixa sonke sinobuntu obufanayo, inyani kukuba akukho bantu babini abafanayo.
Kwintengiso ye-Intanethi, eliphakathi yenye yezinto. Abanye benu banethemba lokuthanda uphononongo… abanye abakuthandayo ukufunda, abanye abathanda ukwabelana ngeefoto, babukele iividiyo, kwaye abanye bathanda ukunqakraza kwisaphulelo esihle xa bekubona. Akukho sisombululo sinye esiya kuthi sifikelele kuwo onke amathemba akho, ngoko ke ukwahluka kwesicwangciso-qhinga sakho phakathi kwabaxumi kuya kuvelisa iziphumo ezingcono. Kwaye ke ukuthengisa amajelo amaninzi phakathi konxibelelwano lwakho kuya kukhokelela kwiziphumo ezikhulu ngakumbi.
Kuzo zonke ezo zinto, unokuba uthetha kwicandelo elahlukileyo- ke kuya kufuneka uzame kwaye uvavanye izibonelelo ezahlukeneyo kunye nomxholo. Iposti yebhlog inokuba yeyona ilungileyo ukuba iyafundisa kwaye inike ukuqonda malunga nendlela abathengi abayisebenzisa ngayo ngempumelelo imveliso yakho. Kodwa ividiyo yeYouTube inokusetyenziswa kakuhle kubandakanya ubungqina bomthengi. Intengiso yesibhengezo inokwenza ngcono ngesaphulelo.
Kungenxa yoko le nto ukuthengisa kwi-Intanethi kunzima kakhulu. Ukugcina uphawu oluhambelanayo kunye nemiyalezo kuyo yonke imithombo yeendaba, ngelixa kusenziwa amandla kumithombo yeendaba nganye, kunye nokuthetha ngokuthe ngqo kwii-personas ezahlukeneyo kufuna itoni yomsebenzi. Akwanelanga ukubona umbono omnye wabathengi bakho… kuya kufuneka ungene nzulu kunxibelelwano lwakho ngalunye kwaye ubone ukuba loluphi uhlobo lomntu ofikelela kulo. Unokumangaliswa.
tags: amanani ewonkeavarejiiprofayile yomthengiimigodi yolwazizemigodiabantumanani